सर्वोच्चमा भाँडभैलो, न्यायाधिश नै विभाजित, जनताले के आश गर्ने ? | mulkhabar.com
सर्वोच्चमा भाँडभैलो, न्यायाधिश नै विभाजित, जनताले के आश गर्ने ?
March 14, 2018 | 7:43 am 181 Hits
नेपालको सर्वोच्च अदालत भाडभैलो र अराजकताको थलोमा परिणत हुन थालेको छ । वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको मागका कारण विवाद र चर्चामा रहेको सर्वोच्च अदालत कान्तिपुरको मुद्धासम्म आइपुग्दा पुर्ण रुपमा विभाजित र राजनीतिको खेलमैदान बन्न पुगेको छ । प्रधानन्यायाधिशको नागरिकता र सर्टिफिकेटको सामान्य विषयमा सर्वोच्चको दैनिक कार्य प्रभावित बनेको धेरै भइसक्यो ।
मंगलबार त सर्वोच्चका न्यायाधिशहरु नै पूर्ण रुपमा विभाजित देखि । प्रधान न्यायाधिश विरुद्धमा खुलेरै न्यायाधिशहरु पक्ष र विपक्षमा खडा भए जसलाई न्यायालय सँग सम्वन्धीत वकिलहरुको संस्था र युनियनहरु पनि स्पष्टै रुपमा खडा भएर विज्ञप्ति निकाले ।
सर्वोच्च अदालत भित्रको यो वेथिति र अराजकताले सर्वसाधारण जनताले न्याय पाउने आशा सर्वोच्चबाट गर्न छाड्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बृहत् पूर्ण इजलासमा सोमबार कान्तिपुर दैनिक र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै थियो । तर, न्यायाधीश राणाले २१ साउनमै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवकाश भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरे । त्यसपछि मुद्दा स्थगित भएको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रधानन्यायाधिश विरुद्धको न्यायपरिषदको पत्र विवादमा, के होला अब ?
काठमाडौं, ३० फागुन । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश गोपाल प्रसाद पराजुलीको उमेर सम्वन्धी विवादलाई आधार मानी पदबाट अवकास दिइएको न्याय परिषदको…